Linux inoda chikuva kuti ibudirire, izvi ndizvo zvinotendwa naTobias Bernard | Linux Vakapindwa muropa
Tobias Bernard, mugadziri weGnome anoshandira Purism kuunza nharaunda pane nharembozha dzekambani, iyo "Librem 5" iyo inotaura kuti iro rairo Linux dambudziko chinhu ndechekuti, Kusiyana neWindows uye macOS, hapana kana chikuva cheLinux.
Nguva Linux ndiyo huru yemunharaunda chirongwa munyika yekusimudzira uye zvisinei neizvi tinoramba tichiteerera mutsara wakakurumbira, "Gore rino igore reLinux" zvakada kufanana nekutaura kuti "gore rino ndiro rakanaka", asi izvi hazviitike. Linux, zvakanyanya sekubatanidza zvitsva, inoramba ichikundikana pane desktop uye kunyangwe vanoverengeka vakaedza kutsanangura izvi yezve nyaya zhinji, kusanganisira kushomeka kwevagadziri vanopa pre-yakaiswa Linux PCs, rutsigiro rwekuchengetedza software uye madhiraivha, nzvimbo dzekushandisa idzo dzimwe nguva vanhu vanowana dzakanyanya kukosha, kana dambudziko rekuparadzaniswa kwezvisikwa.
Zvisinei izvi kuyedza kwakawanda kwakaitwa kugadzirisa iyo ecosystem paLinux zvakanyanya uye nekuwedzera, kubvira kare rimwe rematambudziko makuru nekuda kwekuparadzaniswa ndiwo mafomu, Zvakanaka, kunyangwe izvi zvakakurudzira dambudziko kune vanogadzira nekuti ivo vakapa kunyorera kwavo kuburikidza nekomboni sarudzo yekunzvenga yekudyara nguva yakawanda mukugadzirwa kwemapakeji akasarudzika ekusiyana kwakasiyana kweLinux kana chaizvo ivo vakaisa mari iyoyo nguva iyo makesi ese ari maviri ari chikamu che dambudziko.
Kunyangwe izvi zvachinja nekufamba kwenguva uye kusvika kwezvikumbiro zvepasi rose zveLinux, iti "Flatpak", "Snap" kana AppImage, zvaTobias Bernard izvi hazvigadzirise mudzi we dambudziko.
“Ini ndinofunga moyo wenyaya uyu ndiwo chaiwo wepasi: tisati tave neecosystem ine hutano, tinoda mapuratifomu ane hutano kuti tivake.
Zvake, mapuratifomu akabudirira anosiyaniswa nezvinhu zvakasiyana izvo zvinogona kurasikirwa nyore nekutarisa kumusoro.
Padivi rekuvandudza, Semuyenzaniso, vane anoshanda system ivo vagadziri inogona kushandiswa kuvaka zvinoshandiswa uye nekupa SDK uye maturusi yakavakwa muhurongwa hwekushandisa.
Uyewo unoda zvinyorwa kubva kumugadziri, tutorials, nezvimwe. kuitira kuti vanhu vadzidze kugadzira pachikuva. Uye kana maapplication akagadzirwa, panofanirwa kuve nechitoro cheapp kuti uvatumire.
Asi lVagadziri havagone kuvaka makuru maapp wega. Ndataura izvozvo, iwe unodawo vagadziri. Uye vagadziri vanoda maturusi ekufananidza uye prototyping kunyorera, mushandisi interface matemplate ezvinhu zvakaita sekumisikidzwa uye kufamba.
Padivi rekupedzisira mushandisi, Tobias Bernard anotsanangura izvozvo inoda anoshanda system kune mutengi ine chitoro chakabatanidzwa, uko vanhu vanogona kuwana maapplication akagadzirwa nevavaki.
Iyo huru yekushandisa sisitimu inogona kunge yakafanana neyekuvandudza inoshanda sisitimu, asi kwete hazvo (semuenzaniso, iyi haisi iyo kesi yeApple kana iOS).
Vashandisi vanofanirawo kuva nenzira yekuwana rubatsiro kana rutsigiro kana vaine matambudziko nesystem yavo (kungave zvitoro zvepanyama, webhusaiti yekubatsira kana chero chii).
Mune mamwe mazwi, Tobias Bernard anotenda kuti haugone kutaura nezve chikuva usati wasangana mamiriro mana akakosha: sisitimu yekushandisa, chikuva chekuvandudza, mutauro wekugadzira, uye chitoro cheapp.
Linux, Kwete, nekuti Linux idenari, iyo inogona kushandiswa kugadzira masisitimu anoshanda akatenderedza mapuratifomu anogona kuvakwa, sezvakaitwa neGoogle neApple. Asi kernel yega haina kusangana nemana mamiriro uye nekudaro haisi chikuva.
Ubuntu haisati iri chikuva, nekuti haina zvinhu zvakanyanya kutsoropodza, kureva SDK kana teki yehunyanzvi yevanogadzira uye mutauro wekugadzira. Zvimwe zvekugovera zviri mumamiriro akafanana neUbuntu, asi zvakatoipisisa nekuti havana zvitoro zveapp.
Ndichiri muchiitiko cheGnome, iye akataura kuti iri desktop desktop inonyanya kufarirwa mune yemahara software yenyika uye ine SDK uye dhizaini mutauro. Nekudaro, haina iyo inoshanda sisitimu. Kugoverwa kwakawanda kunouya neGNOME, asi zvese zvakasiyana neimwe nzira kana imwe, saka hazvipe chinangwa chakabatana chekuvandudza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Linux inoda chikuva kuti ibudirire, izvi ndizvo zvinotendwa naTobias Bernard
GNU haisi kambani! saka magumo ako haisi mari… mira kuenzanisa bhekoni nekukurumidza. GNU iripo sechirongwa chemunharaunda chemagariro akanaka, akagadzirwa nesocial for jamii muchimiro chechimwe chinhu chakanaka chekushandisa.
Nekuda kwekuda kukuru kwekuda kukunda vanhu, GNU iripo kune chero anochida, kana vasingadaro
nekuti hazviratidzike senge zvaunoshandisa ... zvakanaka kwazvo, ramba uchishandisa izvo zvawanga uchishandisa uye kubiridzira eons. Asi kuyedza kudzikisira GNU kuti iite yakafanana neyavanobiridzira pirti yavanoshandisa kuti vauye, ndinofunga ndiro benzi capital letter ... GNU ine simba chaizvo uye iri pamusoro nekuti haina kufanana nevamwe varidzi.
Asi kuuya kubva kune gnome, yakajeka kupfuura mvura ... kubvira pavakava vanovimba nesystemd, zvese zvinotaurwa.
Linux inoisveta, Windows kumusoro!
Ndeupi musiyano une basa nedesktop, kana iri kunge isingabatsiri?
99% GNU maseva
Nhare 99% kernel POSIX, FreeBSD + Linux
80% kana kupfuura Linux
Chrome OS (Linux) malaptop anodya musika muUS
Uye MS WOS inowedzera LiGNUx terminal rutsigiro
MuChina neRussia ivo vatove vakasarudza KUTAMIRA hutongi hwese kuLiGNUx DESKS
Huawei atotengesa malaptop nemamirioni ane Deepin LiGNUx pre-yakaiswa.
Apo Huawei inotengesa malaptop ayo neDepin LiGNUx pre-yakaiswa muWest, kuwedzera kuChina neIndia (kana chimwe chinhu chakafanana) ichave iri gore reLiGNUx desktop.
Uye iri padyo zvakanyanya kupfuura zvatinofunga.
Kwete chaizvo iyo desktop, pasina kuve musayendisiti wemakomputa kana yemahara software inofarira, kusaziva uye kune yangu chikamu "kunyanya-kutsamira kwe linux" neakasiyana "mavhenekeri" anogadzira mhando yemabhuru ekuwandisa pakusarudza kugovera neiyo tafura .
Pamusoro pekuve munzvimbo dzakasiyana, WEB, NETWORKS, HOFISI uye kunyangwe mitambo, yaunza kufarira kukuru kune wekupedzisira mutengi "mushandisi kana mutengi" asi dambudziko rayo riri chaizvo mukuita kwayo "chishandiso".
Kuzivikanwa kwaro kuri kukura asi hapana distro inotarisana nevatengi inokwezva zvakakwana kuti mumwe munhu aone linux mudziyo padhuze neiyo windows mudziyo uye oti, zvakanaka izvi zviri nani pane chimwe chinhu chinotarisirwa nemutengi, "chengetedzo, kugona uye mutengo wakaderera» .
Muenzaniso wakanakisa ndewe android, asi zvausingakwanise pama mobile phone zviri kuramba zvichiderera, ini ndinofunga kuti mune ramangwana Android inozoenda kune yakakura distro iyo inokwikwidza windows, asi kwete sepiri distro asi sechinhu canonical.
Ini ndinobvuma, nekuda kwekuparadzaniswa uko kune Linux, zvinonetsa kuisa hwaro kuti ugadzire yakabatana chikuva.
Kunyangwe hazvo Linux iri iyo yepakati chikamu, nekuti yemahara software inokutendera iwe kutora iyo sosi kodhi yekushandisa, Linux distro kana chero chirongwa chinogoverwa pasi pematemu aya, munguva pfupi inotevera munhu kana sangano rinozotaridza kutora kodhi yacho. zvishoma kana zvakanyanya uye izvi zvicharamba zvichidarika senge tambo.
Chii chandichaita nacho, nekuti ini ndichatora semuenzaniso nyaya yaDebian panguva iyo yavakasarudza kutora systemd ... Izvi zvakakonzera kusagutsikana kwakakamura nharaunda mavaive ivo pro systemd uye iyo anti systemd, iyo yakagadzira iyo yekupedzisira ichazosarudza kuenderera pamwe nekuona kwavo kweDebian isina systemd iyo yakatungamira mukugadzirwa kwaDevuan.
Mumwe muenzaniso, gnome pandakaita shanduko kubva kuGnome 2 kuenda kuGnome 3, vazhinji vasingagutsikane uye vakapera mune mamwe mapurojekiti aigona kutora hwaro hweGnome 2 uye akaverengerwa muMate.
Chekupedzisira muenzaniso uko pfungwa yekuti "Ini ndinoda yako projekiti, asi ini ndoda yangu yega vhezheni yako" inoshanda, isu tine Ubuntu iyo yakatorwa kubva kuDebian kana nyaya yeDepin iyo sevazhinji vanozoziva ndeye OS yakagadzirwa muChina .
Kusvikira zuva iro munhu wese paachagara pasi oti "ok, ngatishandei pamwechete kubatanidza Linux", nyaya yeLinux inokunda padesktop haizoitika.
Mune maonero angu izvo linux inoshaya ndeyekuti inogona kushandiswa pasina chero chekuwedzera Hofisi application.
Linux pasina mubvunzo yakasvika mapoinzi ayo vamwe vaisatombogona kuwana, ndizvo zvazviri mumaseva sezvo achitonga pamusika.
MuMobile (kubva pakuona kwako) iri kubudirira nekuti makambani mazhinji anogona kuigadzirisa pasina kuita mari yekutsvagisa nekusimudzira kweiyo OS nyowani, ngatitore nyaya yeFirefox OS yakaguma mukundikana nekuti Android uye kunyangwe iOS Iwo haasi masisitimu ezuva ranhasi kana makore mashanu apfuura, vakapfuura nemazhinji makore ekuramba vachisimudzira kuve kwavari izvozvi. Firefox yakakundikana nekuti yakanga isina mafomu akakosha ayo anowanzo kukwezva mushandisi akajairika, anova masocial network, web browser, kutumira meseji pakarepo.
Izvi ndizvo zvinoitika zvemagetsi masystem, mashoma makambani akazvipira mukuvandudza kwemukati. Zvakanaka, Linux yatove nenheyo munzvimbo kuti dzigadziriswe kune zvakasiyana zvinodiwa.
Kana ari malaptop kuChina, ane zvirambidzo zvakawanda, saka sevazhinji vedu tinoziva kunyangwe ivo vaine yavo yemagariro network.
Mune maonero angu ekuzvininipisa semushandisi anga achiedza kugoverwa kweLinux kwemakore mazhinji, ndinofanira kutaura kuti dambudziko rakakosha nderekuti hapana dhiraivha muLinux, uye izvo zvinoita kuti kugoverwa kumwe nekumwe kuve nemabuts ayo, chimwe chinhu chisingaitike Mahwindo nekuti zvese zvingangoitika zveMunhu zvakakumikidzwa kune imwe chete sisitimu yekushandisa, ndosaka ichi chiri chakapenyeswa zvakanyanya Ndinovimba zuva richauya apo patine imwechete kugoverwa kweLinux inotsigirwa nenharaunda huru uye tese tinogona kunakidzwa neOS pakakwirira uye pasina buts ... Kunyangwe gore rega rega ndanga ndichiona shanduko huru mukuparadzirwa kwakasiyana, ndinobvuma izvozvo izvo zvinondichengeta ndichienda ndichishandisa Windows, uye chokwadi ndechekuti HANDIDI, asi ndinomanikidzwa kuzviita.
"Linux pasina mubvunzo yakasvika pamapoo izvo vamwe zvavakatadza kuwana, ndizvo zvazviri mumaseva sezvo zvichinyanya kutonga pamusika."
PS4 inoshandisa Orbis OS iyo yakavakirwa paFreeBSD, Nintendo Chinja zvakare inoshandisa inoshanda sisitimu yakavakirwa paFreeBSD, mashandiro eApple ari BSD OS uye mugove wavo wemusika wakakura kwazvo tisingatauri kuti NetBSD, OpenBSD uye FreeBSD zvinoshandiswa zvakare zvakanyanya, OpenBSD iri inoshandiswa pese pazvinodiwa zvakanyanya mukuchengeteka, NetBSD nekuda kwekubatika kwayo inogona kushandiswa munenge chero chishandiso chinotsigira 58 Hardware zvivakwa zviri kushandiswa neNASA neFreeBSD semuenzaniso inoshandiswa neNetflix neWhatsApp pakati pevakawanda, zvinonzi pamusoro pe40% yezvose iyo internet inomhanya paFreeBSD.
Mune maonero angu, uku kuongorora kwakanakisa. ?
Shandisa BSD nekuti rezinesi rayo rinokutendera iwe kuti utange kubva kuhurongwa hwekushandisa neyakavhurika sosi uye yemahara, gadziridza kwairi, uye wozoshandura iko kuchinjirwa kuita software yepamutemo. Nekudaro, inozivikanwa kwazvo pakati pemakambani mazhinji kutora BSD mune mamwe misiyano yayo. Sony inoshandisawo iyo PS4 uye ichaenderera ichidaro nePS5.
Kana zviri zvekuparadzaniswa kweLinux, icho chinhu chisinga gadzirisike. Kunyangwe kupatsanurwa kwacho kusiri muGNU / Linux, asi asi maraibhurari ayo madhesiki uye kunyorera kwavo kunogadzirwa. Iko kune chairo rudzi rwekusagadzikana mukati meLinux nyika nekuparadzaniswa pakati peGTK neQt. Makambani makuru akasarudza Gnome neGTK, kunyange hazvo chikamu chakakura chevashandisi vane chisarudzo cheKDE Plasma, iyo inoshanda neQt. Kupatsanurwa uku hakusi kuzopera, nekuda kwechimiro chaicho cheGNU / Linux, uko mushandisi anowanzo tsvaga rusununguko rwakanyanya mukugona kusarudza pakati pesarudzo dzakawanda, uye vagadziri vanowanzo gadzira maforogo kutora avo maonero avo kuva Anwendung.
Zvisinei, ini handioni kupatsanurwa sechipingamupinyi chikuru kuLinux ichiputika padesktop. Chikonzero chekusabvisa chiri muvagadziri vehardware, kunyanya maPC anototengesa iwe muchina neWindows pre-yakaiswa. Kana vakabvuma ndokuenderera mberi nekutengesa maPC neLinux akafanotungamirwa, ichave iri nyaya yemakore mashoma Linux isati yave dhesiki standard kukuvadza Windows. Huru hukuru hwevashandisi haigadzike sisitimu yekushandisa, ivo vanongotenga iyo PC nehurongwa hwatoiswa kare. Kungofanana iwe usingaise Android, iwe unongotenga terminal uye inotouya neApple kunze kwekunge watenga iPhone. Zvakare nekuti vagadziri vekupedzisira vatosarudza kushandisa Android nenzira yakajairika. Kana iyo PC ikaita zvakafanana neLinux, saka vanhu vaizoshandisa zvakanyanya Linux pane desktop.
GNU / Linux ini ndaida kare.Why not now? Pane zvikonzero zvakati wandei pakati pavo GNU / Linux mubatanidzwa weGNU neLinux inogadzira imwe chete sisitimu inoshanda iyo inoita kuve zvidimbu zvidimbu pamwechete kuita sisitimu yekushandisa inoshatisa zvakanyanya kana ichienzaniswa neOpenBSD, NetBSD uye FreeBSD (Iyo 3 mikuru BSDs) Zvakanaka, iwo mashandiro akakwana ekushandira uye zvinoita sechinhu pasina kugara pasi asi kuti chimwe chinhu chakanyatsorongeka, chakarairwa, chine kuenderana pamwe nekusava maviri mapurojekiti asina chinangwa chimwe chete, saka kune matambudziko ekutsamira anogadzirwa semuenzaniso neRPM mapakeji, Kunyangwe iri imwechete pasuru pane matambudziko ekutsamira, tisingataure kuti kune huwandu husina musoro hwekuparadzira hwakati wandei hwakafanana kune humwe uye husingape zvakashata kunze kwekuti kupusa uye kupusa kufunga kuti zvese zviri nyore uye yakapusa kushandisa kugadzira kupatsanurana uyezve muGNU / Linux zvakajairika kuona mumwe munhu achida kudzoreredza zvese seSystemd inova inosemesa inosvipa ne shit Pamusoro, hongu kune akati wandei maitit masisitimu asi iyo ndeimwe yemazhinji matambudziko eGNU / Linux, hapana chiyero asi munhu wese anoenda kwaanoda.
Chekupedzisira, aiwa, haisi Spam, ini ndinongotaura zvikonzero zvinoverengeka nei GNU / Linux isingandide uye ichitadza pa desktop kunyanya nekuda kwenhamba huru yekugovera, zvichienzaniswa neBSD, yekupedzisira mhandu dzeGNU / Linux uye kunyangwe vazhinji vasingafarire hunyanzvi hwezvinhu vanoziva kuti izvi zvinokanganisa maitiro ehurongwa hwekushandisa uko GNU / Linux ine kusakwana kukuru uye nehurema zvichienzaniswa neBSD iyo ingave iri pamwe neGNU / Linux yakanyanyisa kupfuura Unix-Senge.
Tiri mubhizinesi senguva dzose, tichifananidza kambani iri colossus nekuda kwekutengesa nekutengesa zvakare OS imwe chete, neLinux inova chirongwa chekushandira pamwe, hachina kuenzanisa, zvinhu zvakasiyana kwazvo, kana usingade. iyo, usashandise Linux, kana iwe uchinge uchinge usingabatsiri kuti uwane zvaunoshandisa usashandise linux, zviri nyore sezvazviri.
Ini ndaizotaurira Tobias kuti anetseke zvishoma nezveGnome, kuti kunyangwe zvichiratidzika kuti ndiyo nzira huru isiri iyo, zvinyorwa zvacho ndezve Fuzzy pane peji iwe iwe usinga zive chaizvo kana izvo iwe zvawakaverenga zvichiri kushanda kana kuti zvapera. , iyo yekuvaka Gnome ndeimwe pfungwa isinganzwisisike uye kuti iwedzere pamusoro, kuomarara kwekugadzira nzvimbo dzekushandisa muGnome nemapakeji akaita seGlib pasina kushandisa maRAS ​​maficha akakwirira kana asiri akakwirira kwazvo, chimwe chinhu chaunodzora paunoda tweak kodhi yekushandisa .
Padivi re "app zvitoro" Ini handitendewo kana, une AppImage HUGE application gallery, pachikamu cheplatpak uye snap kune zvakare software zvinyorwa zvechero chinhu icho mugadziri anotsunga kuita dockerize, uye kana ichi chisiri zvakakwana, Kune zvakare HUGE repository yezvishandiso zvinoshandisa Electron, saka usandiudze kuti hapana marekodhi uye zvese izvi pasina kuverenga marekodhi eimwe neumwe madistros ari nyore nyore kuisa pane semuenzaniso kutsemuka kwechimwe chirongwa yeWinX kuti haudi kubhadhara pini yakanaka yemari.
Zvinotaridza kwandiri kuti pane dzimwe nzira dzakaringana dzechimwe nechimwe chezvinhu zvinokumbirwa naTobias, uye nerombo rakanaka pane dzimwe nzira dzakanaka kwazvo.
Nei WhatsApp iri kutsvaira pamusoro peTeregiramu, ichive yechipiri inyanzvi kumusoro? Nechikonzero chimwe chete icho Windows ichiri mambo pane desktop.